Awunayo i-Inthanethi? Funda ukuthi ungathatha kanjani amakhosombe akho ekhaya | Kusuka kuLinux
Awunayo i-Inthanethi? Funda ukuthi ungathatha kanjani amakhosombe akho ekhaya
Lapho ngine-computer ekhaya, ngangisebenzisa I-GNU / Linux ngaphandle kwenkinga noma ngabe ungenayo i-intanethi ukusebenzisa amakhosombe.
Engikwenzile kwakuthatha ikhophi lamaphakeji afakwe kwikhompyutha yami yomsebenzi ngiwafake / uwavuselele ekhaya. Kunezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene zokwenza lokhu, ngizokukhombisa ezinye.
2 Hambisa kahle:
3 Isebenzisa i-dpkg-scanpackages
Ilungele abasebenzisi be Ubuntu. Nge I-APTOnCD sizothatha wonke amaphakheji esinawo enqolobaneni I-APT ku .iso ngaphandle kwezinkinga. Ukuyifaka:
Ukuyisebenzisa, simane sisebenzise uhlelo bese senza lokho elisitshela khona igxathu negxathu. Akukho okuxakile.
Ungathatha indawo yakho yokugcina nge-.iso (noma eziningana, kuya ngosayizi) Nomaphi lapho ufuna ukuya khona Ungadala iso ku CD y DVD.
Ungavula i-zip ku-zip bese ukopisha yonke into ngaphakathi kufolda, bese ubuyekeza lapho.
I-APTOnCD kuthola lapho unamaphakeji amasha bese uyangeza ukulahla amadala.
Uma ungenayo CD-RW o DVD-RW uzoba nokuchitha imali uma ungomunye walabo abathanda ukuvuselela nsuku zonke, noma ungathola njengenye iphuzu 2 lezinzuzo.
Uma usebenzisa ukuphina kahle ngamagatsha amaningana (Ukuhlola, iSid, Ukuhlola), kungakunika amaphutha lapho ufaka ukuncika.
Le ndlela ilungele i- Squeeze Debian. e Ukuhlolwa kwe-Debian Ngibe nezinkinga ezithile ngoba angikopishile amaphakheji kufolda yendawo engiya kuyo.
Zonke izinketho Ukuhamba okufanele kungaboniswana kumanuwali yayo (indoda apt-move). Ukucushwa kwayo ku- /etc/apt-move.conf futhi kufanele siguqule ezinye izinto kuwo, ngoba lokhu sivula umhleli wethu oyintandokazi kulelo fayela:
Futhi kufanele sinake le migqa elandelayo, okuyiyona kuphela okufanele siyiguqule:
Lokhu kungaphezu kokwanele kuzilungiselelo.
Lokhu kuzosikopisha, kufolda esiyikhethile, wonke amaphakheji avela kunqolobane yethu
Dala ukwakheka kwesibuko ngamaphakeji esinawo enqolobaneni.
Ihlukanisa amagatsha amakhulu kanye ne-Contrib kuphela ku-Main, ngakho-ke lapho ungeza ikheli ku-source.list, kufanele sibeke kuphela okungeyona mahhala.
Uma sinokuphina kahle, singalanda igatsha ngalinye ngokuzimela.
Kuze kube manje angikatholi lutho.
Qaphela: Lokhu kuyinto efana nokusebenzisa I-APTOnCD
Umsebenzi waleli thuluzi ukudala i-mini repo ongayithutha kalula futhi uyifake kufayela le- imithombo.luhlu, kusuka kumafayela alandiwe noma lawo owafakile uwedwa.
Imodi yokusebenza imi kanjena: Okokuqala faka dpkg-dev
Kopisha amafayela kusuka kunqolobane ye-apt uye kufolda othola ukuthi ikhethelwe ukusebenza, ake sithi ibizwa nge-repo futhi ikhona / ikhaya / umsebenzisi / repo /.
Ungafaka futhi i- .deb ukuthi ufuna
Manje siya kufolda yethu: repo (esimweni esinjalo).
Esikwenzayo lapha ukufunda wonke amaphakheji akwi- / ikhaya / umsebenzisi / repo / nefayela liyakhiwa Amaphakheji.gz ngalolu lwazi; Ngokuya ngenani lamaphakeji, kuzoba yisikhathi sokuqeda inqubo.
Ukuqala ukusebenza nge-mini-repo entsha eyenziwe, isinyathelo esilandelayo kungaba ukuyifaka ku imithombo.luhlu, lokhu kutholakala ngokulandela lezi zinyathelo:
Ngomhleli wethu wombhalo (leli cala nano):
Sengeza umugqa olandelayo:
Kubalulekile ukugqamisa, ukubheka, ukuthi ngemuva kwefayela, ikholoni (:) bese kufakwa islash eyodwa (/) kuyo, futhi nangemva kwefolda yokugcina, kulokhu i-Desktop, akukho slash, kuthatha isikhala bese ifolda ye-mini-repo (repo) ene-slash ekugcineni.
Ngalezi zinyathelo, sidale i-mini-repo elungele ukuthuthwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Awunayo i-Inthanethi? Funda ukuthi ungathatha kanjani amakhosombe akho ekhaya
Okuthile ngaphandle kokusabalalisa okusebenzisa i-RPM?
Angikaze ngiyizame, kepha kungumbono / umkhondo lapho ungaqala khona ukubheka.
Ngeshwa, asinalo ulwazi oluningi ngalolu hlobo lwephakeji, kepha impela kukhona okuhlukile kwenye indawo.
Kukhona ithuluzi le-createrepro lokwenza amakhosombe avela enkombeni lapho kutholakala imitapo yolwazi.
Bheka http://blog.kagesenshi.org/2007/01/howto-creating-your-own-yum-rpm.html lapho bachaza inqubo echazwe kahle.
Okunye okungenzeka ukusebenzisa keryx, ungalanda amaphakheji kusuka ku-Linux noma ku-Windows, bese uwafaka kukhompyutha yakho ngaphandle kwe-inthanethi. Isebenza kuphela ku-Debian naku-Ubuntu.
Ngikwenzile nakwezinye izikhathi ezedlule uhlelo ukulanda amaphakheji we-linux ngaphandle kwe-inthanethi, kepha bekufanele ngishiye i-U_U ukuze ngiqale enye iphrojekthi ebunjiwe kakhulu, engizoyethula ngaphambi kokuphela konyaka 😀
Ubungumdali we-sushi-huh? : -Wow, kuhle. Ngayisebenzisa kaningana. Kuyiqiniso ukuthi kukhona amanye amathuluzi wokuqhafaza, kuzofanele ngiqoqe imininingwane eminingi ngawo.
Ngicabanga ukuthi into elula kunazo zonke kimi bekulokhu kungukuhlenga amaphakheji kusuka / var / cache / apt bese ngiwadlulisela kwimemori noma yini. Ngifika ekhaya, ngivule ikhonsoli yami, ngiye kufolda lapho kukhona amaphakheji bese ngifaka konke ngokuthayipha Sudo dpkg -i * .deb
Izixazululo ezinhle, ZONKE, kufaka phakathi ibhulogi enhle kaDronocho, ngijabule kakhulu lapho ngithola amabhulogi asebenzayo kwisoftware yamahhala, futhi nangaphezulu uma ikuDebian yethu ethandekayo.
Ngiyabonga mngani, kuyintokozo ukusiza futhi ukubuyisa kancane lonke lolo lwazi umphakathi osinike lona 🙂
Angazi noma kuzoba ukulungiswa yini kodwa, uma sisebenzisa umugqa oqondile esigungwini kuzobukeka kanjena:
ukuvuselelwa kwesudo aptitude && sudo aptitude upgrade && sudo apt-move update
Noma kuzwakala kungafuneki noma kusobala, kepha, kuhlala kunabantu abangaqapheli leyo mininingwane emincane hahaha.
Ngiyabonga ngolwazi ... 😀
Ngabe kukhona okunye okufana ne-Synaptic? Kimi kungcono kakhulu
ngiyabonga ngolwazi, kepha umbuzo uvela i-aptoncd yakha iso ngezinhlelo ezilandwe ku-pc nge-inthanethi kepha kwi-pc ngaphandle kwe-inthanethi kuzofanele ukuthi ifakwe i-aptoncd kepha ukufakwa kwayo kwenziwa nge-pc ene-inthanethi ngaleso sikhathi, wenza kanjani buyisela iso elakhiwe ngaphandle kwe-aptoncd ku-pc ngaphandle kwe-inthanethi.
Okuthunyelwe kuhle ... Ngabe kukhona uhlobo lwalawa mathuluzi kepha kugxilwe kumaphakeji we-.rpm?
U-Antonio A kusho
Sawubona. Yini ongiluleka ngayo. Nginekhompyutha ehlukanisiwe ye-toshiba enamawindi 7 ne-Debian Linux 7 ngisebenzisa i-GRUB. Njengoba iluchungechunge lwe-Graphics ATI x1200, ngisele nesiphazamisi futhi inesikrini se-tty kuphela. Lapho kusethwa i-Sudo, umaki wokumaka awutholakalanga. Ngizamile ukulanda amakhosombe nge-Suhsi huh ne-camicri cube, bekungenzeki. Ingabe ikhona enye indlela ongangincoma ngayo.
Phendula u-Antonio A
Ihlaya: Ukuxazulula izijeziso zesigaba ngokukhalipha: D.
Ama-ISO amasha weSabayon Linux v7